Uninzi lwabasetyhini luba luhlungu kwisisu emva kokubeleka. Oku kungenxa yokuba umsebenzi oqhelekileyo we-muscular system, zombini izihlunu zezitho zangaphakathi kunye nezihlunu zesisu, ziphazamiseka, kuba zonke ezi zihlunu zide zisesigxina. Kwakhona, ibhinqa kwisisu sayo ngeli xesha kukho amaninzi amaninzi afakwa. Indlela efanelekileyo yokulwa nale ngxaki i-bandage postpartum.
Imeko apho isisu sithatha emva kokunikezelwa nzima kunzima ukubiza umnqweno, ngenxa yentsholongwane enkulu yamathumbu esisu esiswini kwaye ikhululekile kakhulu. Kule meko, izihlunu azikwazi ukugcina izibilini zangaphakathi, ezikhokelela ekuphuhlisweni kwe-hernia yodonga lwangaphakathi lwesisu, phakathi kwazo apho kunokwenzeka khona ukugcina umgca wezimvu ezimhlophe, umsikazi wakhe kunye nabanye.
Ukutshintsha iimeko zangaphakathi kunye nemisipha ekhonza ukuxhasa iziphathamandla zangaphakathi, ngenxa yoko ukuzala kwabo kunye nokuguquka kungenzeka.
Kwaye ekugqibeleni, isisu sesisu emva kokuzalwa asibukeka sihle kakhulu - siyancipha ngenxa yemali eninzi kunye neenwele. Umbuso onjalo ufuna ukubuyiswa.
Yintoni enokukunceda ibhanti yokuhamba emva ?
I-bandage enjalo ifowuni ekhethekileyo ayivumeli udonga lwangaphakathi lomzimba ukuba luxhomeke, lusekela izitho zeplavis kunye nesisu esiswini, zibavimbele ukuba bangawa phantsi, kwaye zivimbela ukuphuma kwezitho zangaphakathi ngokusebenzisa izihlunu ezinamandla ezidongeni lwangaphakathi lomzimba.
I-bandage emva kokubeletha kufuneka igqitywe kakade kwisibhedlele sokubeleka, ngamanye amaxesha ingasetyenziselwa kakade ngosuku lokubeletha - oku kuya kunceda ukukhawuleza ukubuyiswa kwesibeleko kunye nokwenza ilungiselelo elungileyo lezitho kwi-pelvis kunye nasentanjeni esiswini. Ukongeza, i-bandage post-postage iyanceda ukunciphisa umthwalo emthonjeni, odiniwe ngumthwalo onzima owenzeka ngexesha lokukhulelwa-oku kunciphisa umngcipheko wokuphuhlisa i-lumbosacral radiculitis, ukubonakala kwidiski ye-intervertebral i-herniated, ikhupha ukukhathala kunye nentlungu.
Ngubani ongavunyelwe ukugqoka ibhanji ?
Ukugqithwa kwebhanki emva kokuzalwa kunqunywe ngugqirha. Kukho inani leengqinisiso, apho ongeke usebenzise i-bandage:
I-Flatulence kwizifo ezahlukahlukeneyo zesistim sokutya kunye nokutyumza intlungu kwisisu;
Iinkqubo ezivuthayo kunye namanxeba eludongeni lwangaphakathi lwesisu (njengokuthi, umzekelo, ukuvuvukala kwe-sutures esele kwinqanaba le-caesarean - Kunconywa ukuba usebenzise ibhanti ejoliswe kulabo abanesigqeba esinqumlekileyo);
Izilonda ezahlukeneyo zesikhumba, ukukhawuleza nokucaphuka, kunye nezinye izifo zesikhumba kwindawo yokugqoka i-postpartum bandage;
I-Edemas yemvelaphi ye-cardiovascular or renal;
Ukunganyamezelani komntu ngezinto ezisetyenziselwa ukwenziwa kwebhanki.
Iintlobo zeebhanki zangemva kokuzalwa
Iibhanki ezingaphantsi kokubeletha ezenziwe nge-microfibre dandruff zibhekwa njengowona mgangatho ophezulu. Abafaki isisu, i-atolko isilungise kakuhle, ngelixa ixhamla umswakama kwaye idlula umoya. Kwezinye iimeko, ikotoni inokudibaniswa neyiloni, kodwa ikotoni isoloko ibaluleke kakhulu kwi-bhandage.
Iimpawu ezibonakalayo kwi-bandage yangemva kokuzalwa ibhanti e-elastic ekhoneni kunye nokuxhasa ukufakwa okufakwe kwisisu. Ibhinqa inokuzigqiba ngokuqinisekileyo ukuba isisu siyakukhangela kangakanani, ngoncedo lwezinto ezizenzekelayo, ukulawula izinga lokunyanzeliswa kwezicubu.
Ngeentsuku zethu, imboni ivelisa amabhandeki eentlobo ezahlukeneyo: eziphezulu (ngaphambi kokuguqula), ezantsi (ukuya kwintonga), ngohlobo lweebhulukhwe (ukuya emadolweni okanye ezintsini), kwi-vidette ene-dense efakwe kwisisu, njalo njalo. Kukho amabhande amabhokisi emva kokuzala, ayenziwa ngefom ye-band elastic okanye ibhande, egqunywe kumqolo osezantsi.
Kukho iibhanji ezikhethekileyo ezihamba phambili ezijoliswe kulabo bafazi abafumana unyango lwe-caesarean, oluya kunceda ukulungisa i-sutures emva kokusebenza kunye nokuphulukiswa kwabo ngokukhawuleza.
I-bandage enjalo ayifanelekanga kwaye ikulungele ukugqoka, inokugqithiswa okanye ingaphantsi kwengubo yangaphantsi okanye ngokuthe ngqo kumzimba.
Indlela yokulungiselela ukuzalwa komntwana: iinkonzo zonyango zanamhlanje zamantombazana kunye nabantwana abasandul 'ukuzalwa
Ngaba umntu kufuneka abe khona ekuzalweni komkakhe?
Yintoni okuyimfuneko yokwenza, ukuba ukusebenza kwaphumelela?
Ukuhlanjululwa kweKrisimesi phantsi komlambo - ukubikezela kwangempela ephupheni
Indlela yokugqoka kakuhle intambo yomfazi: Ulwazi olubalulekileyo kwintombazana!
Ukuphelisa imibimbi ekhaya
Indlela yokujamelana neemvakalelo zakho ezimbi
Isonka sesidlo saseBroodino
Isaladi kunye nesalmon kunye neqanda
Hlanganisa ne-cottage cheese